Heano mabasa edu anotsanangurwa mumushandirapamwe.
Izvo zviito zvinofanira kutowanikwa zviripo.
Basa redu: Maximum yepasi rese kumanikidza kusunungura Selahattin Demirtaş
Angela Merkel anoda kusunungurwa kwaSelahattin Demirtas
Ticharatidzira sei pamberi penzvimbo dzese dzeTurkey munyika !!! Tsigira chirongwa chedu.
Rusununguko rwekutaura ruri munjodzi huru muTurkey. Kubva pakuedza kwekutonga muna Chikunguru 2016, zviremera zveTurkey zvakatora danho rakakura kuvatori venhau nenhepfenyuro dzinoshora hurumende. Uku kukura kunowedzera mamiriro atove akaomarara kune veTurkey venhau.
Vatori venhau vakabvisirwa mapasipoti, vanyori vakasungwa, anopfuura makambani enhau zana nemakumi matatu akavharwa. Pakati pavo pane makambani makumi maviri nemapfumbamwe ekudhinda, ayo akatorwawo. Nhasi, pfungwa yekuvhunduka uye kutya kuvapo kwako kwakapararira pakati pevatapi venhau nevaparidzi ipapo.
Rusununguko rwekutaura rwuri kutsikwa-tsikwa muTurkey. Rusununguko rwekuumba uye kuburitsa pfungwa ikodzero yevanhu isingatauriki. Chokwadi, rusununguko rwekutaura, ruzivo uye nhepfenyuro hwaro hweruzhinji rwevanhu vakasununguka uye veruzhinji.
Tinokurudzira hurumende yemubatanidzwa yeGerman neEU Commission kuti vatore chinzvimbo chakajeka uye chakatsiga padanho razvino rerusununguko rwekutaura muTurkey. Tinokurudzirawo miviri miviri iyi kukumbira ruremekedzo rusingaregi rusununguko rwekutaura mune chero sarudzo dzakabatana, zviito uye zvirevo zvavanoita. Hazvifanirwe kunge zvichitaurirana.
Kana rusununguko rwekutaura rwuchirwiswa uye rwuchiiswa pazvirango zvakakura muTurkey nedzimwe nyika pasi rose, hurumende yemubatanidzwa yeGerman neEU Commission vanosungirwa kuongorora maitiro avo maringe nenyika dziri kutaurwa.
Erdoğan ane mhosva
Turkey Embassy inorwisa PixelHELPER
Hatifanirwe kukuudza izvozvo zvinhu zvakaipa muTurkey, Munhu wose anoziva kuti ikozvino. Erdoğan zvakakonzera kuora mwoyo kwehupfumi.
Munhu wese anotya kurasikirwa nebasa rake, kana kuti atofa nebasa rake. Iyo Turkey Lira haina kukosha zvakare kudarika chechina, mabhangi haasi kunze kwebhizimisi, uye vatengesi vanochengeta pfuti pasi pekambani yekudzivirirwa. The Mapurisa echitendero chechiIslam, vatora hupenyu hweveruzhinji. Pasina chiito kubva kune yekunze pasirese, hapana magumo pakuona kune kusuwa kwatiri kutarisana nako muTurkey. Mhepo haina kukodzera kufema uye chikafu hachina kukodzera kudyiwa. Paavhareji zuva, tinonzwa panhau kuti paive gumi nemashanu kuuraya uye makumi matanhatu mhosva dzechisimba vakaita. Izvi ndizvo zvitsva zvitsva. Nyika yedu iri kupenga uye ichidonha, saka tinodzokera kudzimba dzedu uye tinoedza kuita pfungwa yepasirese pasi. Asi runyararo rwatinowana mudzimba meduwo rwuri kunyangarika zvishoma nezvishoma. Isu tinoti, "Ndapota, zvirinani mutisiye tega mumakamuri edu ekugara. Rega ndive nechimbuzi changu, tv yangu, redhiyo yangu, pfungwa yangu yekujairika, uye handichataura. Tisiyei takadaro. Ndokumbirawo mupumburu pasi kuti upe kuti utibatsire kugadzira hupenyu huri nani kune vanhu veTurkey.
Nazi Eagle ine AKP Logo Kuratidzira, Berlin, Turkey Embassy
Mohamed Ali Lightprojection inopesana naErdogan
Zvakanaka, kudzoka haisi mhinduro! Hatigoni kukusiya iwe woga! Tinoda kuti upenge! Hatidi kuti uratidzire chete, tinoda kuti uite bongozozo! Iko hakuna mhinduro dzakareruka kune kushushikana, kune inflation, uye kuuraya mumugwagwa. Asi nhanho yekutanga iri nyore - GADZIRA MADHARA! Iwe unofanirwa kutora KUKOSHA kwako seMUNHU WEMUNHU! Saka tinoda kuti iwe usimuke izvozvi, kubva pazvigaro zvako uye pasofa rako, uye uvhure hwindo. Bvisa musoro wako kunze uye wodaidzira "NDINOPFADZWA SEI HERE uye HANDISI KUTI NDITore IZVI ZVIMWE!" Shanduko inofanirwa kuitika kuponesa Turkey, uye iyo shanduko inotanga nehasha. Enderera mberi nekudanidzira! Vanhu veTurkey vanoda izwi rako kuvanunura kubva mudzvinyiriri yaRecep Tayyip Erdoğan!
Kana hasha dzako dzasunganidzwa uye manzwi ako anzwikwa, ipapo tinogona kuziva zvekuita tichipesana namambo. Asi chero chinhu chisati chashanduka, unofanirwa kutsamwa uye shandisa izwi rako kudaidzira hupenyu hwakachengeteka uye hwakanaka muTurkey! Nehasha idzi tinoda kutanga chimurenga kurwisa mhuri yeErdogan. Ndokumbirawo mupumburu pasi kuti upe kuti utibatsire kugadzira hupenyu huri nani kune vanhu veTurkey.
Chakavanzika Kochekera Hofisi muDiyarbakır
Erdogan ndiye mutsva hitler
Muvambi wePixelHELPER, Oliver Bienkowski (34), muzukuru wemamirioneyoni Georg Stein († 2016) chii a Canada inogara, inogara ichisimudza mari yakavanzika muTurkey kutsigira mauto eArab Chitubu nyowani. Iine yakagadziridzwa PixelHELPER Foundation Boeing 737, vake fundraisers idanho rakakosha mukati kuunza yakakosha michina yekupandukira mwenje fungidziro uye zvishandiso kune izvo zvido zvechimurenga muTurkey.
Bienkowski, inozivikanwa kwazvo International light artist, akaziva mukaha mumauto eumambo hweTurkey. Nemainjiniya akasiya basa evaGerman vagadziri vezvombo, akaburitsa sutu yekurwisa yakafanana nesutu yakapfekwa na Iron Iron kubva kuMarvel Comics. Iyi sutu inoshanda zvikuru, asi isingazivikanwe, uye saka chombo chakakwana kurwisa uto reTurkey. Pari zvino pane masutu zana ekurwa anogadzirwa uye anotengeswa pamwedzi, akachengetwa munzvimbo dzisingazivikanwe kwese muTurkey renje. Iyi sutu iri pamusoro pechinhu chero chemauto eTurkey chaanogona. Inogona kuparadza yakatarwa ichitarisirwa ichideredza kutambura nekukuvara. Icho chishandiso chakakosha mukuuya kwekuchinja. Aya masutu e Iron Man ekurwa anozogonesa PixelHELPER kupidigura mhuri yehumambo nekumisikidza hutongi hweruzhinji. Chinangwa chaBienkowski ndechekuti mambo vasiye umambo uye nehurumende nyowani yeTurkey kuti igadzire hukama hwakakosha kuEurope nedzimwe nyika dzekumadokero.
Muvambi wePixelHELPER muBoeing 737 yake
Zvokurwisana neAfa pazvombo
Yekutanga mwenje kuratidzira kupinda weTurkey Embassy, ​​Berlin
"Nezvebasa rayo, PixelHELPER anosangana noupenzi uye kusarura kuti azvigadzirise."
anoti Germany Radio Radio / Germany Radio Culture
Pixel Munyaradzi ari kunyanya kunetsekana nezveramangwana raDeniz Yücel, munyori wechiGerman, anopokana, uye mumiriri. Akarangwa nekuda kwesimba rake rekumanikidza. Chirango ichi chakakonzera kutyisa kwepasi rose uye vezvematongerwo enyika vazhinji vaida kuti iyo yekupedzisira-inochengetedza turkey goverment iburitse Deniz Yücel. Iko kushoropodza kwakabva kuUnited Nations, United States, European Union, uye Canada. Turkey inotevera kududzirwa kwakasimba kweIslamic Sharia uye yakaramba kuburitswa.
Kwemwedzi mumwe ikozvino, #FreeDeniz akagara mutirkey turkey, uye PixelHELPER akadaidzira kuti asunungurwe kuburikidza nehurongwa hwezvematongerwo enyika. Kuratidzira uku kwakanangana nekutenderedza Berlin, imba isiriyo yaPixelHELPER, uye yaisanganisira kutakurwa kweMusoro weErdogan mumigwagwa, kuridzwa kwemabhomba, uye kuratidzwa kwemifananidzo yakajeka kuEmbassy yeTurkey. Zvinopesana nekutenda kwaPixelHELPER kutaura kuti hapana chinogona kuitika, uye nekudaro ivo vanoita zvavanogona, uye vanogona kutaura kuti vaita zvavanogona.
Yasvika nguva ye #FreeDeniz
Deniz Yücel akasungwa muna Kukadzi 2017. Vakuru veTurkey vanoti akaramba achishoropodza mapurisa ezvitendero mublog rake nekuda kwekumanikidza kwavo kududziro yeIslam muHumambo hweWahhabi. Akasimudzira nhaurirano nezvenyaya iyi uye akabatanidza internet foramu yechinangwa icho, icho chakazovharwa.
Kubatana pakati peGerman neTurkey kwakakosha, sezvo maTurkeys ari pakati pevatengi vakuru vemakambani eGerman ezvombo. Nekubvumidzwa nehurumende yeGerman, zvombo zvakagadzirwa nemaGerman nemauto zvinopihwa kwete kuTurkey chete, asiwo kune mamwe madzvanyiriri pamwe nehutongi hwehutongi pasi rese. Izvi hazvigone kuenderera. Bhizinesi rerufu rinofanira kupera.
apo yakabatana, vasina simba vanogona kuva vane simba. PixelHELPER anotenda zvakasimba mune iyi pfungwa.
Kusagamuchirwa kwemhuri yeRecep Tacip Erdogan
Bienkowski akagadzira kuratidzwa kwechiedza kweshoko rekuti "Democracy" rakanyorwa pane muraraungu mureza vhezheni yemureza wenyika yeTurkey. Pixel Munyaradzi akapenya ichi chifananidzo kumumiriri weTurkey muBerlin. Mufananidzo wacho waidaidzira vanhu veTurkey kuti vasimuke uye vapandukire umambo hwese. Mureza murarabungu wainyanya kutsigira ungochani munharaunda yeTurkey. Ngochani uye ngochani vanotya hupenyu hwavo ipapo. Izvo hazvisi mukufarira kwevanhu veTurkey kukotamira kunzira dzehushusho dzemhuri inotonga. Pixel Munyaradzi akashandisa zvakare yakajeka caricature kukumbira kuParamende yeGerman kuti imise chero kuendesa kunze kwemaoko kuTurkey, izvo zvaizobatsira kunetesa hutongi. Katsi yemurarabungu iri kudivi redu! PixelHELPER anodaidzira hutongi hweTurkey kuti husiye uye vabvumire sarudzo dzemahara dzegutsaruzhinji uye ichaita zvese zvinobvira kutsigira shanduko muTurkey. Pixel Munyaradzi anotevera misimboti yeiyo French Revolution: "Rusununguko, Kuenzana, & Fraternity." Idzi dzidziso dzinodikanwa zvakare kurwisa kusavimbika kwezvematongerwo enyika uye kuunza rusununguko kuvanhu veTurkey.
Kuvimba kwevanhu veTurkey paErdogan nderimwe rematambudziko makuru akatarisana neshanduko yakadaro. Vanopfuura makumi manomwe muzana evashandi veTurkey vanoshandirwa munzvimbo dzeveruzhinji. Muna 70, hurumende inoshandisa madhora zana nemakumi maviri emamiriyoni emadhora ekuAmerica pamihoro, mihoro, nezvipo. Iyi ingangoita hafu yezvese mari inoshandiswa nehurumende. Kuisa kumanikidza kuna Recep Tayyip Erdoğan uye kuchengetedza iyi nyaya pamberi pevanhu, PixelHELPER anovavarira kuumba mwenje wenguva dzose kumamishinari eTurkey muBerlin nemuEurope yose. Mambo vanofanirwa kuenda uye sarudzo dzakasununguka dzinofanirwa kuitwa. Turkey inoda democracy kuti idzore rugare nerunyararo munyika. Kunyange Raif Badawi angave izwi rimwe chete, izwi rake rinomiririra mamwe manzwi mazhinji anotya kutaura kunze. Akatambura nechirango chemakore gumi mutirongo, 2015 shamhu neshamhu, uye faindi ye120 US dollars. Njodzi yaBadawi inozivikanwa pasi rese, asi iri kuda kudonha kubva mundangariro dzeveruzhinji. Pixel Munyaradzi akatsunga kubatsira Badawi, pamwe nevanhu veTurkey, kuti vazvisunungure kubva kuhudzvanyiriri hwaRepepa Tayyip Erdoğan.
Isu tiri kungoita zvishoma kudarika kwemonke pane imwe nyika duku.
Muvambi wePixelHELPER, Oliver Bienkowski Germany neshamwari yake Mr. Yassin vanobva kuIsrael
Turkey inowana kupisa kwezhizha
Iva mutsigiri uye naizvozvo chikamu chinokosha chePixelHELPER
Sevatsigiri / mupi, iwe pachako uye iwe pachako unopiwa mukana wekupinda muzviito zvePixelHELPER. Sangano redu rine rudo rwakagamuchirwa. Saka, chipo chimwe nechimwe mutero inobviswa.
Batsira izvozvi kune iyo "isingabatsiri PixelHELPER Foundation yeHuman Rights & Minorities" kune vedu vedu betterplace.org
Iwe uchagamuchira tsamba ye-e-mail yemashoko aripo zvino uye tarisa nyaya yakakodzera kwauri. Tiri kutarisira kutsvaga zvinyorwa kuvanhu.
Ivepo apo boka duku revanhu ichishanduko chikuru munzanga.
Dhadharei kambani kusunga se text text * .txt
8 zvikonzero zvakanaka
Tinoshanda zvakanaka, zvakachengeteka uye zvakajeka.
Nezvipo zvako, iwe unogona kugadzira mishandirapamwe inoshanda yekodzero dzevanhu.
Nokuti basa rauri kuita rinoda kufema kwenguva refu.
Iyo PixelHELPER Foundation isangano risina purogiramu uye inobvumidzwa seinonyanya kutsigira.
Tinoda kukutumira iwe risiti yekubatsira.
Mipiro yenguva dzose inogona kubviswa kana kubviswa chero panguva ipi zvayo isina zivo.
Chengetedza hutungamiri mari inoderera: Kana uri pamusoro pebhuku rekupa mari, hatina mari yekugadzirisa chero ipi zvayo.
Germany inosungirwa kuti ipe rubatsiro nekukurumidza kune avo vatapi venhau uye vanyori vanokanganiswa nezvirambidzo kurusununguko rwekutaura, semuenzaniso nekupa isiri-bureaucratic emergency emergency
Batsira kumushandirapamwe unopesana naErdogan
Zviito zvedu zvinobata nenhepfenyuro uye tinoona kuti idzi dzakakosha nyaya dzevanhu hadzikanganwi. Ndokumbirawo mugovane mapurojekiti edu paFacebook! Kana iwe ukatsigira chikonzero chedu, isu tinotenda nemupiro wega wega kuti tikwanise kuenderera mberi nemishandirapamwe zvachose. Kunyangwe mashoma mauros anoita mutsauko! Kugovera kutarisira. Ndokumbirawo mutsigire basa redu rekubatsira. Erdoğan munhu akaipa.
[gallery_bank type = "mifananidzo" fomati = "masonry" title = "yechokwadi" desc = "nhema" inopindura = "chokwadi" kuratidza = "yakasarudzwa" no_of_images = "13 ″ sort_by =" date "animation_effect =" bounce "album_title =" chokwadi "album_id =" 15 ″]
kurwisa mudzvanyiriri Erdogan February 27th, 2021Oliver Bienkowski
Iyo Buntesregierung chirongwa chehunyanzvi chePixelHELPER inogadzirisa matambudziko akakosha enharaunda neimwe nzira nekumisikidza yekunyepedzera "Buntesminien". Ehezve, iyo Buntesregierung inopindira zvakasiyana munhau dzazvino kupfuura zvinoitwa nehurumende yemubatanidzwa. Hechino chirevo chaAngela Merkel pana Julian Assange.
Izvi zvinodiwa nehurumende yemubatanidzwa zvine zvazvinoreva pasi rose. Heano maitiro kubva kuna Mambokadzi naBoris Johnson.
Dzimwe nyika dzirikupindura zviri kudiwa naChancellor Angela Merkel nekero yegore Idzva rakasiyana, kuno kubva kuSwitzerland
Mushure mekunge Angela Merkel, Mambokadzi, Boris Johnson nemutungamiri wenyika yeSwitzerland, VaDonald Trump vakafanirwa kutaurawo nezvazvo.
"Buntesministerium gegen Kushaya pekugara" akagovera macold capsule anotonhorera kune vasina pekugara pahurongwa hwehunyanzvi naAngela Merkel. Pano iwe unowana maviri mavhidhiyo anoratidza izvi zviitiko.
Kuti ushandure nzanga kubva pane yehunyanzvi maonero, iyo PixelHELPER yakasanganisira akasiyana "mavara" mapurojekiti:
Buntesrat, Buntespolizei, Buntes Ministry of Finance, Bunteskanzler, Buntesnachrichtendienst, Bunteskriminalamt, Buntestag, Buntespresseversammlung, Buntesamt yekuchengetedza bumbiro uye Bunteswehr. Pamwe pamwe nevanyori vanobva pasirese pasirese, zviito pane mamwe mapurojekiti zviri kuburitswa zvishoma nezvishoma.
Kugamuchirwa kuBuntesregierung January 11th, 2021Oliver Bienkowski
Manyepo etariro inotungamira kurusununguko!
Iyo yekunyepedzera yakadzika inzira nyowani yekugadzirisa vhidhiyo. Kubva pamazwi ekugadzira kugadzirisa kugadzirisa muromo, tinogona kugadzira chero vhidhiyo. Vatungamiriri venyika vanodzvinyirira vanounza kusiya kwavo basa muvhidhiyo, hondo refu yapera, chimurenga chakaziviswa, imwe kero yeGore Idzva inomuka - mikana iyo yakadzika inodzika yakadzika kwazvo. Iyo PixelHELPER Yakadzika Yekunyepedzera Laborator yakatove yakaburitsa dzakasiyana siyana dzakadzika fakes. Ona sarudzo pane ino webhusaiti. Kana iwe uine chero mibvunzo, ndapota taura nesu kuburikidza neiyo yekubata nzvimbo.
Angela Merkel anoda kuregererwa kwaJulian Assange kubva kuna Mambokadzi naBoris Johnson
Mambokadzi naBoris Johnson vanoita pakarepo, hongu.
Donald Trump anoregerera Julian Assange naEdward Snowden
Angela Merkel anowana iyo Federal Ministry yeMuvara inopesana nekushaya pekugara
Rakadzika Rakaomarara Rabhoritari Kodzero dzevanhu February 27th, 2021Oliver Bienkowski
Ndokumbirawo mubatsire kune paypal@PixelHELPER.tv kuitira zvimwe zviito kurwisa mambo
#Sextourist Embassy Thailand Lightart Kujekesa
Tinopemberera demokrasi muThailand munaJune 24, 2020. Bhendi Faiyen akataura kunze kwekutaura kwamambo kwekurega basa
Kuurayiwa kweRama X.
Thais anorwira rusununguko uye rusununguko rwekutaura ari kutsigira PixelHELPER Foundation yepasi rose kutanga chirongwa chekuratidzira kuna Mambo Vajiralongkorn veThailand, mambo ane hutsinye uye nechisimba uyo, nerubatsiro rwevabatsiri vake, anotonga kuburikidza nekutya uye kutyisidzira muchiuto.
Mambo ane makore makumi matanhatu nemasere ekutanga akava mambo muna 67, asi zvakawandisa vanoshandisa nguva kuThailand. Kwemakore akati wandei ave achishandisa yakawanda yenguva yake muGrand Hotel Sonnenbichl muguta reGerman reGarmisch-Partenkirchen, pamwe chete nevazhinji vevakadzi makumi maviri uye pamwe chete nevashandi vanopfuura zana nemakurukota emuzinda.
Mazhinji evakadzi vari muhari yake nevaranda vakamuka vari vasungwa kuGermany. Ivo havadi kushandira Vajiralongkorn, asi havana sarudzo. Zvinyorwa zvinoshandira mambo muBavaria zvinoti vashandi vasingamufadze vanorohwa uye kurohwa nguva nenguva nevarapi veVajiralongkorn sechirango. Kurohwa kwacho kunoitwa nekuti Vajiralongkorn vanofarira kuona mavhidhiyo evanorwara.
MuThailand, mambo akagadzira jeri uye musasa wechirango mune imwe yemizinda yake. Vakuru nevashandi vemauto vanogona kutumirwa ikoko kwemwedzi nekuda kwekutyorwa kudiki. Ivo vanoshungurudzwa, kurohwa uye kubatwa zvisizvo pamirairo yeVajiralongkorn.
Vanenge vatatu vanhu vanoshandira mambo vakafa mumakore achangopfuura. Imba iyi inoti vaviri vavo vakazviponda uye wechitatu akafa nechirwere cheropa, asi zvakajairika kuziva kuti vatatu vese vakashungurudzwa nekuurayiwa.
Kubva muna 2016, vapfumbamwe veruzhinji verusununguko vanoita zvehutongi vari kutsvaga hutapwa kunze kwenyika vakaurayiwa. Pane ufakazi hwakawandisa hwekuti ivo vakaurayiwa nematare ehungwaru yeThai akatevera rairo dzaVajiralongkorn.
Mambo ari pamusoro pemutemo muThailand uye anogona kuita nekusazvibata. Bumbiro iri rinomupa simba rakakwana uye hapana munhu anogona kuunza mhosva dzeveruzhinji kana kuparwa mhosva.
Iye anodzivirirwa uye anotsigirwa nema Ultra-Royalist mauto anotungamira maThai ehondo mauto. Mauto eThai, kunge monarchy, muvengi we democracy. Muzana ramakore rapfuura, mauto akakunda simba kagumi nemaviri mumauto coups uye anogara achipindira mune zvematongerwo enyika. Thailand haina kumbobvira yakwanisa kuvandudza demokarasi yakagadzikana nekuti monarchy nevemauto vakarangana kudzikisira sarudzo. Vajiralongkorn vari kutungamira mauto evarwi anopfuura zviuru makumi mashanu Royal Guard mauto kuThailand kudzvinyirira kupokana.
Kanokwana kana munhoroondo yazvino yeThailand - 1973, 1976, 1992 uye 2010 - mauto eThai akauraya vanhu varatidziri mumigwagwa yeBangkok vachida democracy. Mauto akauraya vanhu vazhinji veThai kupfuura zvaakambouraya mauto ekune dzimwe nyika muhondo chaiyo.
Vajiralongkorn ikozvino ave muwanano yake yechina. Akabuda uye akanyadzisa mukadzi wake wekutanga achangoroora uye pakupedzisira vakamuramba. Mukadzi wake wechipiri akadzingwa kubva kuThailand muna1996 pamwe nevanakomana vaviri vevaviri. Akarambana nemukadzi wake wechitatu muna 2014, akamumanikidza kusunga imba, uye akatanga hutsinye hwemhuri yake. Vabereki vake, vanun'una vatatu, hanzvadzi, babamunini uye dzimwe hama dzinoverengeka vakasungwa.
Vajiralongkorn akaroora mambokadzi wake wekare gore rakapfuura, asi kashoma kumuona uye anosarudza kupedza nguva yake yakawanda pamwe chete nevarume vake paMukuru Hotel Sonnenbichl mukadzi wake achigara muhotera muguta reSwitzerland reEngelberg.
Vajiralongkorn ndiye mupfumi akapfuma kwazvo pasirese ane hupfumi hweanopfuura mamirioni makumi mashanu emadhora. Asi hupfumi uhwu hauna kumukwanira - gore rega rega anoda mari hombe kubva kubhajeti rehurumende, iro rinotsigirwa nemuteresi weThai. Gore rino mambo achagamuchira anodarika mamirioni mazana masere nemakumi masere nemashanu emadhora kubva kubhajeti reThai.
Vanhuwo zvavo vanoshuvira uye vanofa nenzara sezvo denda reCovid-19 richitsvagura kuThailand nepasi rose, apo mambo paGrand Hotel Sonnenbichl vanogara muumbozha, vanopambadza mari zhinji yemutero, uye vanoshusha vashandi vake nevashandi vake. Vashandi vanorohwa uye vanoshungurudzwa havashinge kubata mapurisa eGerman nekuti vanotya kuti mhuri yavo ingadzoserwa kuThailand.
Vazhinji vaThais vanoziva mhosva yamambo wavo uye nehutsinye, asi manzwi avo anodzikiswa nemirairo yedraconia. Chero munhu anoshora monarchy iri mujeri makore apfuura.
Haasi Thais chete anotambura naMambo Vajiralongkorn. Iye zvakare anoremedza vateresi veGerman nekuti nyika inofanirwa kumubhadharira iye kuchengetedzeka uye kudzivirirwa. Anoita kutyorwa kwekodzero dzevanhu paivhu reGerman - kutengesa uye kushungurudza vanhukadzi uye kushungurudza varanda vake, vaanobata sevaranda. MaGerman haafanire kushivirira izvi munyika mavo.
Naizvozvo, vatevedzeri vekutonga kweThai vanotsigira PixelHELPER Foundation kutora matanho pamwechete.
Tinoda kuti nyika izive nezve huwori uye hutsinye hwaVajiralongkorn.
Tinoda kuti arege kushungurudza vanhu veThai.
Tinoda kuti Germany ibude kunze nekuti akatyora mitemo yakati wandei.
Tinoda kuti atongwe muThailand nekuda kwemhosva dzake.
Uye isu hatisi kuzopedzisa kushanya kwedu kudzamara atumirwa kumba kunotarisana nematare.
Kana iwe ukatitsigira, tapota titumireiwo meseji uye tipe kuPixelHELPER pane yedu webhusaiti: https://pixelhelper.org/en/hilfe/
Pamwe chete tinogona kugumisa kutonga kwaVajiralongkorn kwekutya uye kuunza demokrasi chaiyo kuThailand.
Kuendeswa kwechingwa kune varombo vekumaruwa vagari veAit Faska
Kugamuchirwa ku project Africahilfe yePixelHELPER. Pakarepo mushure mekufa kwaKar Heinz Böhm weMenschen für Menschen, takaendesa 2014 kuMorocco kuti tive nheyo yezviitiko zvedu muAfrica. Iye zvino, 5 Makore gare gare, takawana zvishoma uye tinokwanisa kupa rubatsiro rwekufambira mberi muAfrica yose. Zviri nyore kuronga kubva kumusha wedu weNorth Africa kunobva kuEurope.
Project kutanga mukati mebwe renje.
Nzvimbo yepurojekiti Nyamavhuvhu 2019
Tine purazi diki, makiromita makumi mana kubva kuMarrakech kuMorocco, yakashandurwa kuita studio inowirirana yekugara. Mukugadzira pasi pemaziso emakamera, isu tinoshandisa yedu-gadziriro yepamhepo svutugadzike yesoftware software, yatinozopawo kune mamwe masangano anobatsira ekuvandudza ekushandisa kwemberi.
PixelHELPER anoda kupa vanhu rusununguko rwekugadzira hupenyu hwavo vanozvigadzirisa uye vanozvimirira vasina nhamo yematambudziko uye kupa vana vavo ramangwana rakanaka. PixelHELPER inobatsira pakuvandudza kwakagadzikana kwenyika yose mune zvehupfumi, zvemagariro, zvezvakatika uye zvematongerwe enyika. PixelHELPER anorwisa urombo uye anokurudzira kodzero dzevanhu, mutemo wemutemo uye democracy. PixelHELPER inobatsira kudzivirira matambudziko uye kukakavadzana kwechisimba. PixelHELPER inokurudzira hukama hwakanaka, hwemagariro ehupenyu uye hunoenderana nekugadzikana kwekudyidzana kwenyika.
Isu takapa yedu yekuyerera swarm rubatsiro software paTED Kutaura muMarrakech muna 2014. Iyo purazi ndiyo yekutanga nzvimbo inoshanda patinoshandisa software yedu. Tinotarisira vatsigiri vatsva nevashanyi kuchirongwa chedu.
Kuburikidza nechitofu chikuru chemarasha muNorth Africa, Ait Faska Morocco
(5 metres kubhurwa padenga, zvisingawanzo)
Nechingwa chakemagaba pamusoro pekushomeka kwechikafu chinokonzerwa nehondo uye shanduko yemamiriro ekunze
Kuti uone iyo Instagram feed iwe unofanirwa kuwedzera yako wega API Chiratidzo kune iyo Instagram Sarudzo peji reedu plugin.
kupindirana kwekugadzira mapurisa ekugadzirisa zvinhu
Livestream swarm kubatsira software
Isu takapa yedu yekuyerera swarm rubatsiro software paTED Kutaura muMarrakech. A TED Hurukuro chiitiko apo mataurirwo ekugadzirisa mamiriro anopiwa pamisoro inotifambisa vanhu uye inotifambisa mune ramangwana.
Zvokudya zvekuEurope zvinokonzerwa nemasikari
Iyo Mbera revapambi musasa iri 2000 makiromita kubva kuPixelHELPER livestream dzimbahwe. Bhekari yechingwa chedu chakatenhwa rubatsiro rwechimbichimbi runogadzira chingwa cheupenyu-hurefu hwemisasa yevapoteri nenzvimbo dzenjodzi Iyo spirulina algae inogadzirwa muMorocco inofanirwa kubatsira kupokana nekushomeka uye kushaya zvinovaka muviri mudura. W.Tinoda kuvakira nzvimbo pamberi pemusasa wevapoteri uye kushandisa svondo redu rekushandira shanduro software kubatsira vanhu. Musasa wevapoteri ndiye 4 kupfuura guta Mauritania, tinoda kuva nechokwadi kuti kutambura hondo vapoteri iri kuderedzwa.
Iyo PixelHELPER yakagadzira yakasarudzika nzvimbo uye inounza vatariri padyo nekugadzirwa kwezvinhu zvekubatsira mu Africa. Emergency cubes anouya nehope bhegi, gasi chitofu, chekutanga rubatsiro kit & amp; Tochi yakagadzirirwa. Zvese zvaunoda kana iwe ukarasikirwa neimba yako mushure meyakaitika njodzi.
Keyword: Kukwidziridzwa kweArt & Tsika
Isu tinogadzira mabasa & tarisiro
Isu tinosika mabasa uye tinogadzira kubudirira kwakakwana nekuvakwa kwemauto emumatambo evanhu, kushandiswa kwemashizha emashizha uye zvipo zvemitambo. Sezvo nzvimbo yedu iri pakati penharaunda yezvemaruwa, makambani mazhinji emunharaunda nemafambisi ekugadzira zvinhu vanobatsirwa nemirairo uye vanogona kuhaya vashandi vatsva pachavo.
Marokisi ndiyo nyika yemazuva ano muAfrica.
Kubva kuMorokoro tinosvika kunyika dzose dzeAfrica dzine zvigungwa zvegungwa nemakungwa akadzika-muTangier neCasablanca. Kubatana kweEurope kwakanakisisa. Kubvira kuSpanish nyika kusvika kuMarrakech, kune maawa 6 chete nemotokari.
Isu takagadzira nzvimbo pano yekubatanidza rubatsiro rwevanhu nekukurumidza uye kuunza nekukurumidza kunzvimbo yako nemotokari, mudziyo wegungwa kana ndege. Pano pane saiti isu tinogona nyore kugadzira zvese izvo vanhu vari mumisasa yevapoteri vanoda. Tichaisa nzvimbo yekutanga pamberi pekambi yeUNHCR muMauritania.
Nzvimbo yedu yekuronga teknolojia inobatanidza 6 mabhokisi ekubatanidza kurutivi rworuboshwe rwevhidhiyo mhenyu. Aya mabhokisi anogona kuchinjwa nesu chero nguva ipi neipi pamusoro pebasa uye mari yezvipo. Isu takagadzira musangano wekudyidzana wekubatsirana unozoita kuti tigone kupindura mamiriro ezvinhu ari mumisasa yevapoteri uye kupa rubatsiro rwakananga.
Izvo zvinokwanisa zveSchwarmhilfe software yedu zvinowanikwawo kune dzimwe NGOs. Taura nesu.
European makedheni chingwa emergency emergency - chikafu kugadzikana kwe Africa January 27th, 2021Oliver Bienkowski
Magumo eHong Kong sezvaunoziva iwe
China iri kutora danho repamutemo kekutanga kukunda nyika yaimbova yeBritain korona. Hutungamiri hweChinese huri kumutsiridza musangano wekuratidzira uye kupokana nenyika dzekumadokero.
Chinese People's Congress inopasisa iyo #HongKong Security Law, iyo inoviga "Nyika Imwe, Maitiro maviri" uye democracy. Chiedza chinoratidza pamureza weGerman #Bundestag #Bundesregierung & @HeikoMaas vanoziva rusununguko rweHongKong. #HongKongNeedsHelp #HongKongProtests
Kekutanga kekutanga kubva pakatanga chirwere chegorona, zviuru zvakaratidza muHong Kong vachipesana neChina maitiro mudunhu rakakosha rekutonga. Mapurisa aishandisa gasi rekubvarura, pepuru yekupuruzira uye matangi emvura. Dozens akasungwa.
Kuratidzira kwakaitwa nemusi weSvondo kwakakonzerwa nehurongwa hwaBeijing hwemitemo yekuchengetedza chinangwa chekuparadza nekuparadzanisa zvinhu muHong Kong. Kunyangwe paine zvairambidzwa kuungana kwegorona, zviuru zvakaenda kumigwagwa munzvimbo dzekutengesa dzeCauseway Bay uye Wan Chai.
Vamwe vakaita mabhena aiti, "Denga rinoparadza Chinese Communist Party". Pave paine zvakare kudzokororwazve mafoni kurusununguko. Nhamba huru yemauto ekudzivirira akaenda kunopokana nevaratidziri.
Kuratidzira kwakaenderera mberi manheru. Vanokurumidza vanoita zvemitambo vakanda windows windows. Nekuda kwe dambudziko re corona, mitemo yematanho inoshanda munzvimbo ine huwandu hwehupfumi hweAsia uye hupfumi hwemari, iyo inobvumira mapoka evanhu vasere.
Britain yakanga yabhadhara Hong Kong kubva kuChina kwemakore zana nemashanu, yekutanga Hong Kong Island, gare gare Kowloon neNew Territories. Chibvumirano chakapera musi waChikumi 150, 30. VaBritain vakapa korona yavo kuChina.
Mushanduri weChinese Deng Xiaoping (1904-1997) akagadzira izwi rekuti "nyika imwe, maitiro maviri" kare kuma1980 kuita kuti kudzoka kweHong Kong kuvepo zviri pamutemo. "Maitiro maviri mune imwe nyika anokwanisika uye anotenderwa," akadaro Deng muna 1982. "Haufanire kuparadza hurongwa hwenyika huru, nesuwo hatifaniri kuparadza imwe."
Kuzvimirira kubva kuHongKong / Anti China mushandirapamwe June 15th, 2020Oliver Bienkowski
Mabhisikiti eBrown - anonetsa kugaya
à #PixelHELPER Tsvaga # Federal Archives anofanira #Wikipedia Nyaya yakanyorwa naHans #Bahlsen inogona kunyorwazve. Akashanda pavadziviriri vevateresi general command kusvika 1944. Paive nekubatana kwevaNazi #Zwangsarbeiter & Mafekitori muUkraine #VerenaBahlsen
Mushure mekunge kuonekwa pachiitiko ichocho Online Marketing Rockstars yakatanga. Nenguva isipi, kutsoropodza kwekuzvikudza kwaBajjsen kwakava nenhepfenyuro yakasviba: Heiress, uyo anozvikudza zvikuru nezvenhoroondo yebhizimisi remhuri, ane chikwereti chavo uye kushandiswa kwevanhu vakaurayiwa nehurumende yeNazi.
As the mufananidzo-Newspaper iro heiress rakabvunza nezvazvo, iye akaita zvakadzikama kwazvo. "Hazvina kunaka kusanganisa hurukuro yangu nazvo," akadaro - uye anogona kunge ari kurudyi zvishoma: Hazvina kunaka kukanda izvi kune mumwe munhu angoda kutaura nezvazvo, saivo Hupfumi hunogona kuva "mota" "kutifambisa isu mberi sevanhu".
“Iyo yaive nguva yangu isati yasvika uye isu takabhadhara vashandi savaGerman uye tichivabata zvakanaka. Dare rakaramba zvichemo zvacho. Nhasi hapachina zvirevo zvinopesana naBahlsen. Bahlsen anga asina mhosva. "
Uye icho chaiva chaicho chaibata padzimba, apo Bahlsen anogona kuzvipa mhosva iye zvino nguva ino. Kunze kweizvozvo ...
Vaya vakaurayiwa vakamanikidza mushandi kubva muchero weBahlsen. Chii chakaitika kuvashandi vekumanikidzirwa vaisagona kushandazve? Vakaurayiwa mumisasa yevasungwa.
Chiedza chinoratidzwa paHolocaust Memorial muBerlin
Dhinda munyori wemifananidzo: Dirk-Martin Heinzelmann
Aida mapepa: Ndiani ane ruzivo pamusoro pokudzinga Bahlsen vamanikidzi vakamanikidzwa kumisasa yevasungwa? Dhinda munyori wemifananidzo: Oleg Rostovtsev
Asi Bahlsen vakaramba vachitaura. Uye izvi zvakanzwika sezvizvi:
... kuti kambani haina kubatira vashandi zvakanyanya kudaro vangadai vakabata kana vakanyunyuta mushure, ...
... uye kuti kuri kushinga kutaura kuti Bahlsen haana "mhosva yechinhu" nekuda kwekuti dare rakamhanyisa kambani iyi nemutemo wekukanganisa mhosva dzayo. havana kukwanisa kutongazve, ...
... handizvo zvakashata zvakashata kuti uite newawakapfuura here? Ndezvipi zvaizoita kuti Bahlsen azviratidze kuti aine hanya? Pane kudaro, akasarudza kutamba basa rekumanikidzirwa muhurumende yeNazi.
The company Bahlsen Sekureva kwemushumo mupepanhau revhiki nevhiki re "Die Zeit", vashandi vake vevaranda vanogona kunge vakabhadhara zvakatowanda pane zvaimbonzi munguva yeNazi. Pepanhau rinodudza ongororo yemakadhi emubhadharo evagadziri vemabhisikiti kubva kumaXNUMX.
Kambani heiress Verena Bahlsen munguva pfupi yapfuura aive neyakaitika yeNazi yemadzitateguru ake nekambani mubepanhau re "Bild" zvakaonekwa sezvisina basa. "Takabhadhara vashandi zvakaenzana nemaGerman uye takavabata zvakanaka," akadaro. Uyu ane makore makumi maviri nematanhatu akumbira ruregerero nesarudzo yake yemazwi.
Vashandi vekuPoland neUkraine vanomanikidzwa vanonzi vakagamuchira pakati pegumi neshanu Reichsmark pasvondo, sekureva kwe "Zeit" mushumo. Kusvika pari zvino chikamu chikuru chemubhadharo wakakura, waive pakati pe23 ne29 Reichsmark, wakadziviswa: Pamitero uye zvipo zvekuchengetedzwa kwevanhu - izvo vakadzi ava vasina kumbobatsirwa - asiwo zvefaindi nemitengo yakakwira yekumanikidza pekugara mumusasa.
"Sei mhuri ichigona kurangarira zvakasiyana?"
Sekureva kweshumo, zvisinei, izvi hazvigone kufananidzwa nekubhadharwa kwevashandi veGerman munguva yeNazi, sekudanwa kwayakaitwa kunongedzera kuArolsen Archives muBad Arolsen. Mutauriri wezvakachengetedzwa akaudza iyo "Zeit": "Zvinoenderana neongororo yezvakaitika kare, vashandi veGerman vakagamuchira mubairo wepakati wepakati pe44 Reichsmark."
Bhuku reBahlsen harifariri kutaura zvakananga pamusoro pemaonero aya kusvika ikozvino.
Sezvo SPIEGEL inoshuma mumagazini yazvino, mhuri yeBahlsen kubva kuHanover yakanyanyobatanidzwawo muhurumende yeNazi munguva yeNazi kupfuura yakambozivikanwa kare. Ndizvo zvakaita sekuru vaVerena Bahlsen nehama dzake mu NSDAP uye vakakurudzira SS.
Der #Wehrmacht #Keks, ari # Krümelmonster #VerenaBahlsen pamusoro Bahlsen inofanira kunge 40% yekambani yako inowanikwa mune #Konzentrationslager#Auschwitz cede. #OhneMampfkeinKampf & #ohneFeldpostkeineKampfmoralChikafu chesimbi cheWehrmacht chakaita kuti kukomba uye nemheni kurwe muHondo Yenyika II. Ipa kuti uone kwechiedza kupesana neBahlsen ku: paypal@pixelhelper.tv Der #Leibniz Biscuit kubva kambani yaVerena Bahlsen yakanga iri chikamu chemugadziriro iyi uye yakagadzirisa hondo. Pasina iye aizova #Stalingrad rakaguma kare. Iko kambani Bahlsen inotakurawo #Temmlerthat the #Hitler Coke yakabereka, zvizhinji zvekupa mhosva yehondo yekuparadzwa #Nazis muReich yechitatu. Kuti Bahlsen akambobhadhara 1500 € mubhadharo kune vamanikidzi vamanikidzi ishoko rakaipa. Bahlsen akapa mapepa neLeibniz Feldpost, iyo nheyo yekukurukurirana kwekutanga munguva yeHondo Yenyika Yenyika Yese. #Kriegspropaganda zvinoreva nhasi #Reklamekunst #DasOriginal# Nurechtmit52Zähnen #Vernichtungslager #eiserneRation #Hannover#Kriegstreiber Apo omubatanidzwa kubhomba vachirwisa vakadzi vanomanikidzwa vashandi aitarisirwa chete dumba repuranga, dzakanaka naanamai ose #Bahlsen hauna kunyange kune vashandi vako #Bunker akavaka. Pano panoratidzira misanthropic capitalist image ya a #Nazi Muteveri mhuri. Kwaingova kuburikidza nemhuri dzakadai maNazi aikwanisa kuchengetedza yavo yekurwara system zvachose. Ngatiratidzei Mai Bahlsen kuti tinovaregerera; kuti uite izvi, unofanirwa kupa makumi mana muzana emasheya ako ku # Auschwitz. Kumbira icho kubva kwauri pachako - unogona kuzviwana pano paFacebook: https://web.facebook.com/verena.bahlsen & Instagram @verenabahlsen
Oetker, Bahlsen & Co vari kusimudzira
Anomanikidzwa mushandi kuBahlsen Oetker & Co. KG April 21st, 2020Oliver Bienkowski
Vogelschiss gegen Hass - kadhi dzvuku revatambi veruvengo
Shiti dzoka nhasi, pamusoro #Hondo ikozvino kune imwe pamambure Mushonga. @PixelHELPER anotumira madonhwe eshiri kune wese anoparadzira ruvengo. Batsira ku paypal@PixelHELPER.tv & nyorera kwatiri ndiani anofanirwa kuendesa inotevera. Tsamba 1 inoenda kuna @_donalphonso kubva ku @world
Mumumvuri wetsika wekugadzikwa kwehunyanzvi #Fencing4Humanity, mufananidzo wemuganho wekunze weEurope, shiri dzekutanga dzakagara. Kubva pano ikozvino ne #Bird shit pamusoro #Hondo vakarwa paInternet.
Vogelschiss nzvimbo muMorocco
MuMorongo kure isu tiri kuvaka yedu Vogelschiss nzvimbo kutumira diki yekufananidzira yeVogelschiss envelopu kuvanhu vanozvinyudza ne #HateSpeech.
Shiri dzinotora chirimwa chedu zvakanaka
Shiri irikushanda kuvenga
Kuvakwa kweshiri yedu shit nzvimbo
Vogelschiss gegen Hass - kadhi dzvuku revatambi veruvengo June 15th, 2020Oliver Bienkowski
SamuelPaty Museum yeChitendero Satire & Rusununguko rweArt
Shevedza kuvakwa kweMuseum yeMachechi Satire & Rusununguko rweArt naSamuel Paty
Kuuraya kwaSamuel Paty hakufanirwe kukanganwika. Unyanzvi haufanire zvakare kuve chikonzero chemagandanga kuuraya vamwe vanhu. Rusununguko rwehunyanzvi rwuri pamusoro pekusununguka kwechitendero. Tinokoka makirasi echikoro kubva kumatunhu ese eEurope kuti vashanyire kuratidzira kwedu kwekunyengera kwechitendero. Kunge sekasi yazvino yerusununguko rwehunyanzvi, isu ticharatidza mamiriro ekunze enhoroondo yekunyepedzera kwechitendero muEurope kwemazuva mashoma. Tinoda rubatsiro rwako kuitira kuti tikwanise kutenga nekushongedza midziyo yegungwa nezviratidzo zvedu. Zvese zveEuropean zvinofanirwa kumira pamwechete kurusununguko rwemashoko nemifananidzo. Ndokumbira utumire mushandirapamwe wedu kushamwari dzese munyika dzese dzeEurope kuti tikwanise kutanga nekukurumidza neratidziro yedu yefoni yerusununguko rwehunyanzvi. Wese munhu anopa anopa mahara kupinda kweupenyu hwese kune ramangwana Pop Up Museum yeChitendero Satire.
Tichaenda kune dzese nyika dzeEuropean ine nharembozha Popup Museum.
Chirangaridzo chedu cheHolocaust muMorocco chakakoromorwa, CNN yakashuma
CNN nezve chirongwa chedu muMorocco
SamuelPaty Museum yeChitendero Satire & Rusununguko rweArt February 24th, 2021Oliver Bienkowski